MUQDISHO, Faahfaahin: Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay inta u dhaxaysa Isbitaal Madiina iyo Villa Baydhaba – Radio Daljir
MUQDISHO, Faahfaahin: Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay inta u dhaxaysa Isbitaal Madiina iyo Villa Baydhaba
Seteembar 24, 2021 2:17 g 0
Maqaayad laga cunteeyo oo kutaalay agagaarka Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa qof iskusooxiray walxaha qarxa iskuku qarxiyay dadkuu kusugnaa goobta.
Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir ayaa la sheegau in uusan geysan wax khasaaro ah marka laga reebo dhimashada qofka isqarxiyey, sida uu shaaciyey Taliska Booliska Soomaaliya.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale qof iskusooxiray waxyaabaha qarxa uu soogalay Maqaaxi ay fadhiyeen ciidamo katirsan DFS, Waxaana ku dhintay qaraxaasi ilaa 9 qof.
Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada qaraxaasi.
Daljir & BBCMA: BARAARUGGA Haweenka | (Taxanaha 91aad (dhegayso)
DAGMADA XARFO EE GOBALKA MUDUG & kobac ganacsi oo ay samaysay (Sawirro)